Fikirakirana ny alam-borona | Reef Resilience
Coastal Resilience dia programa novolavolaina tamin'ny taona 2008 handinihana ny anjara asan'ny natiora amin'ny fampihenana ny loza mety hitranga amin'ny morontsiraka amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina eo amin'ny The Nature Conservancy, United Nations University, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), United States Geological Survey (USGS), Natural Tetikasa renivohitra, Fikambanan'ny mpitantana Floodplain State, University of California ao Santa Cruz, University of Southern Mississippi, Esri, ary Alliance for Development Works. Ny programa dia misy ny fomba fiasa sy fitaovana fanohanana ny fanapaha-kevitra amin'ny fandaminana ny toetr'andro sy ny drafitra faharetana.
Ny drafitra dia misy dingana efatra:
Misoroka ny mety sy ny vulnerability ho an'ireo loza amoron-dranomasina ahitàna ireo tranga hafa ho an'ny tafiodrivotra sy ny ho avy amin'ny ho avy sy ny fiakaran'ny ranomasina miaraka amin'ny fidirana amin'ny fiarahamonina;
Fantaro ireo Solutions noho ny fampihenana ny loza mitatao amin'ny vahaolana iraisana amin'ny rafitra sosialy, ekonomika ary ekolojika;
Makà Action amin'ny tranokala fananganana fiarovana sy famerenana amin'ny laoniny mba hanampiana ireo vondrom-piarahamonina mamantatra sy mampihatra ireo vahaolana natsangana;
Mahaiza mameno mba hahazoana antoka fa mahomby ny ezaka atao hampihenana ny loza mitatao amin'ny loza ary hampihatra ny fampifanarahana ara-toe-karena eo amin'ny tontolo iainana
Tetikasa vaovao, an-tserasera misokatra amin'ny varavarankely vaovaofitaovana fanohanana dia novolavolaina miaraka amin'ny sehatra fandaharan-drafitra sy ny apps maimaimpoana azo ampiasaina amin'ny tranokala. Ny fitaovana fandraketana dia natao hamolavola ny filan'ny drafitra manerana an'i Etazonia sy manerana izao tontolo izao. Ny fitaovana dia mifantoka amin'ny famantarana ny fampifanampiana sy ny fanamafisana ny natiora, saingy misy ihany koa ny fampahalalana ho fanohanana ny valintenin'ny loza, ny famerenana indray ny toetr'andro sy ny ezaka ataon'ny politikan'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fitaovana sy ny rindrambaiko web dia voafaritra ho an'ny mpihaino manokana sy ny fizotran'ny planeta.
Tany Connecticut, ny Coastal Resilience dia nampiasaina mba hampahafantatra ny fiarahamonina mikasika ny mety hisian'ny fandrosoana an-dranomasina ary hanampy amin'ny fametrahana vahaolana maivana hanatsarana ny faharetan'ny fiarahamonina. Vokatr'izany, Connecticut izao no fanjakana voalohany any Etazonia mba hanombantombanana ny morontsiraka rehetra ho an'ny faritra lavitr'ezaka ho an'ny lavarangana ho lava-bary.
Ny fitaovan'ny Coastal Resilience dia miasa any Etazonia sy manerantany hanombanana ny risika sy hamantarana ireo vahaolana hampihenana ny risika, miasa amin'ny mizana nasionaly, isam-paritra ary eo an-toerana ho an'ny drafitra misimisy kokoa amin'ny vondrom-piarahamonina maro. Ny fomba fiasa sy ny fitaovan'ny Coastal Resilience dia nivelatra haingana ary ankehitriny dia misy fanjakana amoron-dranomasina 16 any Etazonia (Alabama, California, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Maine, Mississippi, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Texas, Virginia , Washington), Karaiba (Grenada, St.Vincent ary Grenadines, Nosy Virgin US), ary manerana an'i Mexico sy Amerika afovoany (Belize, Guatemala, Honduras). Nahatratra vondrom-piarahamonina efa ho 100 hatramin'ny taona 2008, ny The Nature Conservancy dia mikasa ny hampitombo ny fandrakofana ny fitaovana sy ny fampiharana tranonkala mahazatra any amin'ny fanjakana maro any Etazonia, manerana an'i Mexico sy hatrany Azia atsimo atsinanana atsy ho atsy.
Ny ampahany amin'ny Coastal Resilience misokatra amin'ny varavarankely vaovaoweb apps mamela ireo mpikaroka, ireo tompon'andraikitry ny governemanta, ary ireo vondrom-piarahamonina mba hanombantombanana ny loza mety hitranga ary hamantatra ireo vahaolana natokana ho an'ny fahasimbana mba hampihenana ny fahavoazana ara-toekarena sy ara-toekarena amin'ny loza mitatao amin'ny ranomasina. Ny vahaolana amin'ny fanentanana momba ny natiora dia ahitana: ny fiarovana na ny famerenana ny lava-bary eny an-toerana ho toy ny buffer; ny famolavolana ny fomba fiasa mifandraika amin'ny rafitra fiarovana voajanahary; fanesorana ny fandrisihana hanangana faritra avo lozan-tany (izany hoe, matetika eny an-tampon'ny faritra mando); ary manamboamboatra ny ombidia sy ny haran-dranomasina naverina tamin'ny laoniny.
Nandritra ny atrikasan'ny Coastal Resilience any North Carolina, ireo mpandray anjara dia miasa ao amin'ny ekipa mba hampiasa ny App Restoration Explorer amin'ny fampifanarahana amin'ny angona ara-tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hampandrosoana ny tetikasa famerenana ny fitrandrahana oyster ho an'ny fiarovana ny moron-dranomasina. Sary © TNC
Ny fitaovan'ny fanohanana ny Coastline Resilience dia ahafahan'ireo mpandray anjara manan-danja mba hampitaha ny zava-misy, ny famerenana amin'ny laoniny, ary ny faharetana amin'ny fampiasana sarintany mora ampiasaina amin'ny tranonkala:
jereo ny fiantraikan'ny fiakaran'ny ranomasina, ny fiakaran'ny tondra-drano sy ny rivo-doza, ary ny tondra-drano any anaty ala; ohatra ao misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNew York
Endriky ny matoanteny amin'ny teny espaniola misokatra amin'ny varavarankely vaovaodranomasina amoron-dranomasina mitombo ny tany ho valin'ny fiposahan'ny ranomasina; ohatra any amin'ny Hoalan'i Meksika
Mampifandray ny angona momba ny toeram-ponenana amoron-dranomasina sy ny fisehoan-javatra ref miaraka amin'ny angona sosialy sy toekarena mba hamantarana ireo vahaolana ahafahan'ny fitantanana ny toerana ahafahana mampihena ny loza mety hitranga any amin'ny fari-dranon'i Etazonia
handinika misokatra amin'ny varavarankely vaovaotetikady fiarovana amoron-dranomasina amin'ny fampiasana habaka maitso (ala voajanahary voajanahary), volomparasy (seawalls, mangana, sns), ary vahaolana hybrid; ohatra any atsimo atsinanan'i Florida
Ampitahao ny loza mety hitranga sy ny fampitomboana ny vintana manerana ny firenena ary hamaritana ny anjara toeran'ny vatohara ho an'ny vatohara sy ny toeram-ponenana hafa amin'ny fihenan'ny loza ref
hijerena ireo loza maneran-tany amin'ny loza voajanahary sy ny fiantraikan'ny fahasimban'ny tontolo iainana any amin'ny faritry ny loza mety hitranga ref; misokatra amin'ny varavarankely vaovaoohatra iraisam-pirenena
Ny fomba fiasa amoron-tsiraka sy ny fitaovana fanampiana ny fanapaha-kevitra dia nanjary fitaovana manerantany sy eo an-toerana amin'ny fitarihana fanapahan-kevitra. Ohatra, mikasika ny politikan'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina any Connecticut, ny fifanarahana fiaraha-miasa nataon'ny tafika amerikana amerikana mba hitantanana am-pahavitrihana ny famerenana amin'ny laoniny ny tobin'ny tafika an-dranomasina any Ventura County, California, ary amin'ny fanarenana ireo fonenana amoron-tsiraka aorian'ny fiparitahan'ny solika Deepwater Horizon any amin'ny Hoalan'i Mexico. Ny Resilience amoron-dranomasina dia ampiharina amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa any amin'ny toerana toa an'i Grenada amin'ny fanombanana ny marefo ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ary koa manao laharam-pahamehana ny famerenana ny ala honko sy ny haran-dranomasina amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Vokovoko Mena, ary manerantany hamolavola ny USAID Coasts at Risk tondro ary World Risk Index miaraka amin'ny Alliance Development Works. Ny Coastili Resilience dia ampiasaina am-pahavitrihana miaraka amin'ny indostrian'ny fiantohana ihany koa hamaritana ny vidiny sy ny tombotsoan'ny vahaolana amin'ny fotodrafitrasa voajanahary hampihenana ny risika. Ny Conservancy dia nanao famelabelarana sy nampiofana mpiara-miombon'antoka isan-karazany ao anatin'izany ny Federal Emergency Management Agency (FEMA), Agency of Environmental Protection Agency (EPA), NOAA ary USGS amin'ny fampiasana sy fampiharana ny Coastal Resilience, ary koa ny tetik'asa 100 Resilient Cities an'ny Rockefeller Foundation izay The Conservancy no mpiara-miombon'antoka amin'ny tontolo iainana voalohany, na mpivarotra tianao. Ary farany, tamin'ny alàlan'ny drafitra momba ny toetrandro nataon'ny filoha Obama, ny The Conservancy momba ny natiora sy ny filankevitry ny kalitaon'ny tontolo iainana dia niara-niasa hanasongadinana ireo fitaovana izay mampiseho ny andraikitry ny harena voajanahary amin'ny fihenan'ny risika. Vao haingana misokatra amin'ny varavarankely vaovaotarehimarika manasongadina ny fiaretana amoron-tsiraka.
Tombontsoa momba ny fitaovana fandefasana karaoba
Mora ny mizara sy mampitaha ireo risika, ny famerenana amin'ny laoniny, ary ny fampitahorana amin'ny alàlan'ny sehatr'asa
Coastal Resilience tool misokatra amin'ny varavarankely vaovaosehatra dia natao hametraka andian-drakitra fampiasa amin'ny aterineto izay azo ampitahaina amin'ny mpiara-miasa na ny vondrom-piarahamonina mivelatra. Izany dia ahafahan'ny mpampiasa mamantatra ny olana momba ny fitantanana amoron-dranomasina, mamaly ny loza iray amin'ny fanapahan-kevitra momba ny tetezamita, na ny fijerena ireo safidy fampifanarahana amin'ny natiora
Ny seha-pihariana fitaovana dia tambajotra maneran-tany eo amin'ny tetikasa, izay midika fa rehefa mandroso ny tranokala iray amin'ny habaka Coastal Resilience na seha-pifaneraserana iray manokana, dia manaparitaka, manamboatra na manova azy ny faritra hafa rehetra.
Ny sehatr'ilay sarintany dia hita ao amin'ny solosaina na tablette amin'ny fampiasana navigateur rehetra mifandray amin'ny Internet
Ny fitaovana dia miasa eo an-toerana, eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, eo an-toerana ary maneran-tany, mifanaraka amin'ny filàn'ny fandaharan'asa manokana, ary mora ny mizara ny vokatra sy ny angona
Ny fitaovana fandefasana ny Coastal Resilience dia eo amin'ny dingan'ny fanavaozana mba hampidirana Espaniola sy fiteny hafa tafiditra ao anatin'ilay fitaovana; Ny fifantohana dia ny fiantohana ny fitaovana tena maneran-tany
Ny fomba fiasa sy ny fitaovana dia novolavola tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa am-pahibemaso
Famaritana ny fitaovana fandefasana karajia
Ny fitaovana sy ny tranonkala dia mampiasa tsara indrindra amin'ny fidirana amin'ny aterineto
Ny fitaovana sy ny rindrambaiko web dia tsy natsangana ho an'ny besinimaro; Ny fampiofanana dia ilaina mba hampandraisana anjara ny mpandray anjara mba hahafahany mampiasa tanteraka ny fitaovana, ny angona, ary ny fanadihadiana. Misy fampahalalana bebe kokoa azo jerena misokatra amin'ny varavarankely vaovaoEto
Miaraka amin'ny fitaovana maro be hita ao amin'ny tranonkala, sarotra ny manala ny niche ary ampiasaina amin'io fitaovana io raha oharina amin'ny hafa izay miteraka olana mitovy. Ho fampahalalana bebe kokoa dia tadiavo ny ezaka hanatsarana ny fampifanarahana ny toetrandro misokatra amin'ny varavarankely vaovaofitaovana fandraketana
Ny fitaovana dia mifantoka betsaka amin'ny haisoratra Amerikana amin'ny mizana any an-toerana, miaraka amin'ny ezaka vao haingana hanitarana ny sehatra iraisam-pirenena
Ny tranonkala dia jerena ao anaty tranokala Internet; Tsy "apps" natsangana ao amin'ny fitaovana finday izy ireo ka voafetra ihany ny fijerena ny fampahalalana amin'ny finday
Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny fampiasam-bola amin'ny programa Coastal Resilience dia ny fampivoarana ny fitaovana, ary tsy ampy ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fanaraha-maso ny fomba fiasa manerana ireo sehatra samihafa. Izany dia nahatonga ny tsy fahampian'ny fahatsiarovan-tsaina mikasika ny fomba ahafahan'ny fitaovana ampiasaina ho an'ny mpihaino goavana.
Ilaina ny fikojakojana maharitra mba hitazonana ny angona sy ny fampahalalam-baovao ao amin'ny Coastal Resilience amin'ny famolavolana ny toetr'andro, izay matetika arosena ho an'ny drafitra drafitra tokana na andiam-pandrosoana. Izany dia nahatonga ny tsy fisian'ny fampahalalam-baovao na ilaina ilaina mba hanohanana ny karazana fanohanana amin'ny fanapahan-kevitry ny fampandrosoana voalohany
Rehefa nirotsaka tamin'ny 2008 ny Coastal Resilience, dia vitsy ihany ny fitaovana fandraketana amin'ny aterineto izay manome fampahalalana momba ny fiakaran'ny ranomasina sy ny fiakaran'ny tafio-drivotra. Misaotra ny fiaraha-miasa amin'ny fiarahamonin'ny fiarahamonim-pirenena, misy ny fitaovana maro isan-karazany ao anatin'io hazondam-piaraha-miasa amoron-dranomasina io. Amin'izao fotoana izao isika dia mila mahay mamantatra ny fitaovana ampiasaina amin'ny drafitra fandaharam-potoana, hahafantarana ny fomba fampiasana ireo fitaovana ireo, ary hahatakatra bebe kokoa ny fomba ahafahana mampiasa azy ireo amin'ny dingana samihafa amin'ny dingana izay mamaly ny olana momba ny toetr'andro sy ny tondra-drano.
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Tetikady mikasika ny loza ateraky ny toetr'andro sy ny tetikasam-piaraha-miady amin'ny toetr'andro
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoastal Resilience
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Coastal Resilience Tutorials
misokatra amin'ny varavarankely vaovao Ny tambajotran-tserasera sy ny fitaovana
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoVideo - Coastal Resilience: fitaovana iray ho an'ny fandrindrana ny morontsiraka any amin'ny tontolo miova
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLahatsary - Fanorenana ny morontsiraka any Grenville, Grenade
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBanky iraisam-pirenena - Manolotra kirany amin'ny vahaolana voajanahary